सेलिब्रेटी विज्ञापन ट्वीटहरू यहाँ छन्! | Martech Zone
सेलिब्रेटी विज्ञापन ट्वीटहरू यहाँ छन्!
आइतवार, सेप्टेम्बर 20, 2009 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
के सेलिब्रेटी समर्थन काम गर्दछ? हो, तिनीहरू गर्छन्। अन्यथा, हामी प्रत्येक दिन सेलिब्रेटीहरूसँग विज्ञापनहरू देख्ने छैनौं, हुन्छौं? क्याथरीन जीटा-जोन्सको टी-मोबाइलसँग समर्थन सम्झौता २० मिलियन हो। त्यस पछि, अभियानको क्रममा टी-मोबाइलको राष्ट्रिय बिक्री २ 20% ले पुग्यो। सेलिब्रिटी समर्थन अब ट्विटर मा, पनि हो!
किन सेलिब्रेटी विज्ञापन काम गर्दछ?
सेलिब्रेटी विज्ञापन3बिभिन्न स्तरहरुमा काम गर्दछ:
परिचित - हामी दैनिक आधारमा सयौं विज्ञापनहरू देख्छौं, त्यसैले विज्ञापन फरक पार्ने क्षमता कुञ्जी हो र प्रसिद्धहरूले त्यो प्रदान गर्न सक्दछन्। क्याथरीन जेटा-जोन्स निश्चित रूपमा मान्छेहरू Verizon मान्छे भन्दा थोरै ध्यान दिनुहोस्!
इम्युलेशन - हामी एक संचालित (उथले) समाज हो र धन र प्रसिद्धि को सपनाहरु हामीलाई प्रभावित। कसैलाई हामी जस्तो हुन वा आफूतिर आकर्षित भएको आशा गर्नु बलियो विज्ञापनको रणनीति हो। निस्सन्देह कि एस्टन कुचर र ओपरा विन्फ्रे (लामो समय) ले करोडौं नयाँ प्रयोगकर्ताहरुलाई ट्विटरमा सार्यो ... अब तिनीहरूले त्यसमा केहि पैसा कमाउन सक्छन्!
प्रतिष्ठा - सम्मानित व्यवसायको रूपमा मान्यता पाउनु व्यवसायको विकासको लागि महत्वपूर्ण छ। ग्राहकहरूले विरलै अर्को व्यवसायको साथ व्यवसाय गर्छन् जबसम्म विश्वास गर्दैनन् कि यो व्यवसाय वैध हो। एक सेलिब्रिटी अनुमोदन निश्चित रूप ले तपाईको ब्यापार प्रतिष्ठित को रूप मा देखिनको लागि लाग्ने समय चाँडो गर्न सक्दछ।
सुरूवात संग प्रायोजित ट्वीटहरू, तपाईं Izea प्रणाली मार्फत प्रायोजित ट्वीटहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कुनै मजाक छैन - तपाई किम कार्दशियान देखि बब विला सबैलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ! मैले आज साइन अप गरेको छु र प्रत्येक ट्वीटको land २ of को विदेशी मुद्रा ट्याग छ। मैले सोचें कि ठीक छ ... कि केन्द्रको मूल्य ट्याग साइटमा प्रकाशित गर्न धेरै नै छ! (मलाई यकिन छैन कि केन्द्र मेरो को ड्राइविंग बिक्री को लागी गरी रहन्छ छ) e-Book or यातायात बढाउनुहोस् ब्लगमा) ... म digress।
कसरी प्रायोजित ट्वीटहरू काम गर्दछ
टैग: सेलिब्रेटी विज्ञापनप्रायोजित ट्वीटहरूtwitter
के तपाईं of शैक्षिक शैक्षिक शैलीहरू खुवाउँदै हुनुहुन्छ?
तपाईंको वर्डप्रेस ब्ल्गमा रीट्वीट बटनहरू एकीकृत गर्दै
सेप्टेम्बर १,, २०११ 21::2009० अपराह्न
चाखलाग्दो विचार DK। भर्खरै सोचेँ कि म केहि रोचक अनुसन्धान उल्लेख गर्छु जसले सेलिब्रिटी अनुमोदनहरूलाई समर्थन गर्दछ। धेरै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि रिचर्ड पेटी र जोन Cacioppo द्वारा प्रकाशित आफ्नो सम्भावना मोडेल मा प्रकाशित मानव अनुनयाधान मा एक अर्का कागज बाट आउँछ। तिनीहरूको दाबी हो कि त्यहाँ मानसिक उत्तेजनाका लागि दुई प्राथमिक मार्गहरू छन्, केन्द्रीय र परिधीय (सूचना ओभरलोड रोक्नको लागि मानसिक संयन्त्रको रूपमा विकसित भएको छ)। केन्द्रीय एक अधिक तार्किक तर्क हो र दिमागका पूर्ण स्रोतहरू द्वारा प्रशोधन हुन्छ जबकि परिधि मनको प्रकारको "पारित" न्याय गर्ने क्रम गर्ने तरीका हो। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा के हो भने यो कि कारकहरू जुन हामीले कसरी कार्यवाही गर्छौ परिप्रेक्ष्य रूपमा जानकारीको लागि निर्णय तोकिन्छ भन्ने कुरा धेरै उथलपुस्तक मानव आकर्षणहरू द्वारा निर्धारण गरिन्छ - जस्तै उमेर, यौन अपील, सेलिब्रेटी स्थिति, वा व्यक्तिगत लाभ। वास्तवमै धेरै चाखलाग्दो सामानहरू, र त्यहाँ थप अनुसन्धानहरू छन् यदि तपाईं वा कुनै पाठकहरू एक पटक हेर्न चाहन्छन्।